Musharaxiinta Mucaaradka iyo ciidamo badan oo gaaray Daljirka Dahsoon - Caasimada Online
Home Warar Musharaxiinta Mucaaradka iyo ciidamo badan oo gaaray Daljirka Dahsoon
Musharaxiinta Mucaaradka iyo ciidamo badan oo gaaray Daljirka Dahsoon
Muqdisho (Caasimada Online) – Midowga Musharaxiinta Mucaaradka ayaa hadda gaaray goobta uu ka dhacayo banaanbaxa weyn ee maalinta berri ah ay iclaamiyeen ee Taalada Daljir Dahsoon.
Madaxweynayaashii hore ee dalka, Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif iyo dhamaan Musharaxiinta ku midoobay Golaha Mucaaradka oo ay kamid yihiin Xasan Cali Kheyre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdikariin Guuleed ayaa socod ku maraya Taalada Daljira.
Musharaxiinta oo ay galbinayaan gawaadhi gaashaman iyo ciidamo badan ayaa socod kusoo kormeeray Taalada Daljirka Dahsoon oo ah goobta uu berri ka dhacayo banaanbaxa weyn ee ay iclaamiyeen, xili ay dowladda soo saartay go’aamo lagu xakameynayo isku-imaatinka dadweynaha.
Waxa uu intaas kusii daray “Madaxweyne waqtiga waa ka dhamaaday waxaa rabnaa doorasho in la aado, waxaa la aamisan yahay in doorashada adiga caqabad ku tahay ka hor leexo, mudahaaraadkan ujeedadiisu waa intaas”.
Sidoo kale waxa uu ku cel-celiyay in banaanbaxa berri ka dhacaya Taalada Daljirka Dahsoon uu yahay mid lagu dalbanayo in madaxda uu waqtigooda dhamaaday si dhab ah ugu diyaar garooban doorasho, islamarkaan uu dalka aado doorasho wada-ogol ah.
Si kastaba, kormeerkan deg-deg ah ayaa imanaya xili ay dhawaan Musharaxiint Mucaaradka ay iclaamiyeen banaanbaxaas, waxaana qaban-qaabadiisa si weyn looga dareemaya magaalada Muqdisho, ayada oo Musharaxiinta dadka ka dalbanayay inay isku soo baxaan.